Rosia: Mahatsiaro ilay sangan’ny Rock ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Avrily 2019 4:03 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, srpski, Español, македонски, English
Ny 4 Febroary 2010, nankalaza ny daty nampalahelo ireo bilaogera Rosiana. Telo taona lasa izay, maty noho ny homamiadan'ny hazon-damosina i Ilya Kormiltsev [amin'ny teny Anglisy], iray amin'ireo poeta sy mpanoratra tononkira mana-talenta indrindra sy mampiadi-hevitra indrindra ao Rosia. Tamin'ny taona 2007, nanjary fahafatesana voalohany nalaza indrindra tao amin'ny RuNet (aterineto Rosiana) ny fahafatesan'i Kormiltsev.
Nanomboka tamin'ny taona 80 tany amin'ny tanànan'i Sverdlovsk (Yekaterinburg ankehitriny) ny tantaran'ny fahombiazan'i Kormiltsev. Nanjary nalaza noho ny asany tamin'ny famoronan-kira tao amin'ny tarika “Nautilus Pompilius” [EN], iray amin'ireo tarika rock sangany nandritra ny vanim-potoana Perestroika [EN] ary avy eo ny Post-Sovietika i Kormiltsev.
Manohitra ny fitondrana komonista ny hiran'i Kormiltsev, na dia nofenoina endrika poetika be angesony aza ny tsikerany ka tsy dia tsikaritra nandritra ny vanim-potoan'ny sivana sovietika. Tamin'ny taona 1999, namoaka ny filaharan'ny “Hira Rock 100 voalohany Tsara indrindra tao anatin'ny taonjato” [RUS] ny radio “Nashe”, ka fito tamin'ireo hira 100 no nosoratan'i Kormiltsev.
Tamin'ny taona 2000, niala tamin'ny asany mpamoron-kira i Kormiltsev ary nanomboka nanangana trano famoahana “Ultra.Kultura” [RUS]. Amin'ny maha-mpandika teny matihanina azy, dia nandika sy namoaka ny sangan'asan'ireo mpanoratra malaza indrindra amin'izao fotoana izao (na Rosiana na vahiny) izy: William Burroughs [ENG], Ernesto Che Guevara, William Gibson [ENG], Huey P. Newton [ENG] sy ny hafa. Nitantara ireo lohahevitra goavana tahaka ny zava-mahadomelina, ny pôrnôgrafia, ny olana ara-poko, ny heloka bevava, sns ny bokin'i Ultra.Kultura.
Tamin'ny Novambra 2006, nandritra ny diany tany Londra, dia nanomboka narary i Kormiltsev. Tao amin'ny bilaoginy farany, nanoratra [RUS] izy hoe:
Roa volana taty aoriana, tamin'ny volana Janoary 2007, voan'ny homamiadan'ny hazon-damosina izy. Tara loatra raha hanampy an'i Kormiltsev. Nanoratra ny namany, mpitsikera mozika, Boris Barabanov fa tsy mijaly ny aretiny ihany i Kormiltsev fa mijaly noho ny tsy fisian'ny aterineto sy ny tsy fahafahana manoratra “zava-dehibe” ho an'ny mpamaky azy. Nahazo fanehoan-kevitra 1720 ny lahatsoratra farany nataon'i Kormiltsev. Kivy noho ny tsy fahitana vaovao momba ity mpanoratra ankifizin'izy ireo fatratra ity, namela hafatra malahelo tao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra ireo mpankafy azy. Nanontany momba ny tononkira sy ny tononkalony kosa ny olona sasany, afaka nandre ireo hiran'ity mpanoratra ity.
Nanjary iray tamin'ireo zava-nitranga resahana be indrindra tao amin'ny tontolon'ny blaogy ny fahafatesan'i Kormiltsev, nitatitra ny gazety “Kommersant” hoe.
Amin'izao fotoana izao, manana sata “Gazety Fahatsiarovana” ny kaonty LiveJournal an'i Kormiltsev. Nakatona ireo fanehoan-kevitra hafa rehetra saingy misokatra ho an'ny rehetra kosa ny votoaty ao amin'ny diary. Nosoratan'ny namany ny lahatsoratra farany tao amin'ny gazetiny ary namerina ny teny farany nataon'i Kormiltsev:
Bilaogera A.Monach nanoratra hoe:
Regul_leia nanoratra hoe: